Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ansixiyay guddigii doorshada Madaxweynaha – Radio Daljir
Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ansixiyay guddigii doorshada Madaxweynaha
Noofember 17, 2018 11:33 b 0
Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay Gudiga doorashada madaxweynaha maamulka KGS.
Gudigan ayaa waxaa ansixiyay 138 Xildhibaan, waxaana u codeeyay 134 Xildhibaan oo cod gacan taag ah ugu codeeyay, waxaa diiday 2 Xildhibaan, halka laba kalena ay ka aamuseen.
Gudigan ayaa ka koobna ilaa iyo 15 xubnood, waxaan la filayaa in doorashada ay qabsoonto waqtigii loogu tala lagalay.
Dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa isha ku haya doorashada iyo qaabka ay u dhacayso.
Guddiga doorashooyinka Federaalka oo kulan la qaatay Madaxweyne Gaas (dhegayso/daawo)
Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo Qarax lagula eegtay Buuraleyda galgala ee gobolka Bari